Mamita iraka any amin'ireo Distrika 03 amin'ny tapany Atsimo ny ekipa tarihin'ny Governora RAFIDISON Richard Théodore nanomboka tamin'ny Alarobia lasa teo: - Anisan'ny dinika amin'izany ny mikasika ny PRD na Drafitrasam-pampandrosoana taona 2020-2023,- Teboka lehibe amin'ity fitsidihana ity ihany koa ny fametrahana vatofehizoro an'ireo asa fanamboaran-dàlana mamakivaky ireo Distrika notsidihina:Ny 19 aogositra tao Brickaville, ny 20 aogositra tao Vatomandry ary ny 21 aogositra ny tao Mahanoro.
Namoizana ain’olona ny fanatsarana lavadrano tao Ambohidravaka-Antsirabe, omaly. Mirefy 30 metatra any ny halalin’ilay lavadrano rehefa avy nodiovina. Tonga teo amin’ny fotoana nametahana ny bizo no nitranga ny loza. Bizo miisa valo no napetaka. Tsy nisy olana ny fampidinana ny bizo niisa fito, fa teo amin'ny fampidinana ny bizo farany no nitranga ny loza. Latsaka niaraka tamin’ny bizo tao anaty lava-drano ny mpandavaka iray. Tsy nahatana ny tady nampidinana azy ireo ka dia tapaka tampoka, voasintona niaraka tany koa ny lehilahy iray, izay talen-tsekoly iray ao Antsirabe.
Nisitraka ireo aro-vava sy ranom-panafody fandiovan-tanana (gel hydroalcoolique) avy amin'ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ireo mpanao gazety teto Antsirabe. Nidina taty an-toerana ny biraon'ny Holafitra notarihan'ny filohany, Rakotonirina Gérard nizara izany. Nambaran’ity farany fa Faritra efatra no misitraka ireo fitaovana ireo araka ny nanoratana ny tetikasa tany am-piandohana, ka ho hita eo ireo faritra hafa satria nivoatra ihany koa ny fihanaky valanaretina Covid-19 ity.
Notanterahina ny zoma 14 aogositra 2020 ny fitiliana faobe Covid-19 andiany faharoa ho an’ny Loholona sy ho an’ny mpiasa eto anivon’ny Antenimierandoholona. Niisa 114 izy ireo no nisitraka izany fitiliana izany tamin’ity andiany faharoa ity, ho fanohizana ny fitiliana faobe Covid-19 izay natao ny 08 jolay 2020. Izao moa no natao dia ny ahafahana mamehy ny fiparitahan’ny valanaretina sy mba ahafantaran’ny rehetra ny toe-pahasalamany, hoy ny fanazavana azo avy ao amin’ny Lapa maitso Anosikely.
Mpianatry ny oniversite ao Toamasina miisa 41 no afaka nody eto Maroantsetra, rehefa nahazo fankatoavana avy amin’ny CRCO Atsinanana sy CRCO Analanjirofo. Natokam-ponenana ao amin’ny EPP Androkaroka izy ireo harahi-maso ara-pahasalamana noho ny fisian’ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Nanao taratasy fanekena tsirairay avy rahateo izy ireo, fa hanaja ny fepetra ara-pahasalamana hisorohana ny fihanaky ny Covid-19. Salama avokoa izy 41 mianadahy taorian’ny fizaham-pahasalamana natao azy ireo teo ampahatongavana. Nilaza izy ireo fa vonona hanaraka ny lamina.
Nanao fanarahandia sy savahao ireo dahalo namono nahafaty ny Ben'ny Tanàna Ampanihy, Distrika Miandrivazo, Faritra Menabe ny Zandary avy amin'ny kaompania Miandrivazo nampian'ireo avy amin'ny Hery vonjy taitra Antananarivo. Nifanehitra tamin'ny andian-dahalo maro tao Beteva Kaominina Ampanihy izy ireo ny marainan'ny 15 aogositra 2020. Nisy ny fifandonana mahery vaika. Naratra voatifitra teo amin'ny fe ny zandary Lietenà iray nitarika ireo andian-tafika nanao hetsika savahao. Nandritra ny vonjy aina an'ilay manamboninahitra dia mbola notafihan'ireo dahalo ihany koa ny fiara nitondra azy ka naratra noho izany ny Zandary iray hafa.
Ao amin’ny Birao foiben’ny Organe de Lutte contre les Evénements de Pollution na OLEP eny Ambatobe – Antananarivo no misy ny birao vonjimaika ny Foibem-pirenena ho an’ny Tontolo Iainana na ONE. Ny ONE sy ny OLEP moa dia samy rantsana miankina amin’ny Minisiteran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy. Firaisankina teo amin’ny mpiasan’ny ONE sy fanohanana ara-pitaovana avy amin’ny GIZ sy ny oriansa SMTP no ahafahan’ity Foibem-pirenena ho an’ny Tontolo Iainana ity hanohy ny asany indray.
Nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato omaly ny fiaramanidina nitondrana ny andiany faharoa amin'ireo « concentrateurs d'oxygène » miisa 1095. Tohin'ireo efa tonga tamin'ny 09 Aogositra 2020 lasa teo ireto. Misitraka izao fampitaovana izao avokoa ireo hopitaly lehibe rehetra manerana ny Nosy, izay mandray ireo mararin'ny Covid-19. Nanamafy ny Minisitry ny fahasalamam-bahoaka, Pr Ahmad Ahmad fa ny tanjona voalohany ampiasaina ireo fitaovana ireo dia ny hanafoanana tanteraka ny isan'ireo aina hafoy amin'ny valanaretina "Coronavirus", noho ny tsy fahampian'ny fitaovam-pitsaboana, araky ny efa nambaran'ny Filoham-pirenena. (Jereo Sary Tohiny)